Ihe & Ọrụ | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
E nwere ọtụtụ Ọrụ na Ọrụ dị na mpaghara nke nwere ike ịmasị ndị nne na nna na ndị nlekọta nke ụmụaka Oakleigh School.
Anyị ga-agba mbọ ịme ka ị mara ihe ndị a ma ọ bụrụ na enwere nke ọ bụla ị maara nke a edeghị ebe a biko jiri nke anyị ụdị ajụjụ ịgwa anyị gbasara ha.
Ndepụta ihe - Barnet: njikọ a na barnet.gov.uk na ebe nrụọrụ weebụ wee depụta ihe omume niile na-eme na ụbọchị 7, 14, 30 ma ọ bụ 60 na-esote. Site na kọmpụta kọmpụta maka ịkwa akwa enwere ọtụtụ ihe ịhọrọ site na!
Lelee Ndepụta Ihe Omume Barnet
Ọrụ Barnet nwere nkwarụ (obere oge ezumike) bụ maka ụmụaka, ndị na-eto eto na ezinụlọ ha bi na Barnet. Nwere ike ịchọpụta ihe ọrụ ezumike dị mkpụmkpụ dị na mkpụmkpụ akwụkwọ ndekọ. Akwụkwọ ndekọ ahụ gụnyere ndepụta nke ndị na-eweta ihe zutere oke ogo anyị. Nwere ike ilele ihe nzukọ ọ bụla na-enye iji nyere gị aka ikpebi ihe omume ga-adaba maka mkpa nwa gị. Nleta Barnet Obere nkwụsị.
Barnet Trampolining maka mmadụ niile - Nke a bụ klọb na-azọda ụmụaka nke ọgbọ niile nwere mkpa pụrụ iche. Ọ na-eme na Mọnde ụbọchị 5.00-6.30, n'ụlọ akwụkwọ ụmụ nwanyị QE. Ọ na-agba ọsọ site na ndị nkụzi nwere ahụmahụ, ndị nne na nna / ndị nlekọta na-anọnyere nwa ha, yana nnọkọ ikpe na-akwụghị ụgwọ iji hụ ma nwa gị ọ na-enwe ya. Ọnụ ego a bụ £ 6 kwa oge, nke nwere ike ịkwụ ụgwọ ọkara n’otu oge. Biko kpọtụrụ Theresa Bull na maka nkọwa ndị ọzọ, na 020 8343 9776 ma ọ bụ 07701 014175.
Ogige Gburugburu Ebe obibi Barnet - nke di na ala achoro 7.5 acre nke bu 'ebe nke ihe di nkpa maka nchebe okike'. Ndị Enyi nke Barnet Environment Center bụ ọrụ ebere edebanyere aha nke na-enye ihe omume maka mpaghara mpaghara na ihe omume maka ụlọ akwụkwọ iji kụziere ma kpalie mmasị na-adịgide adịgide na ekele maka ụwa okike .. [More Ama]
Oge ezumike n'efu maka ndị nlekọta na ndị na-elekọta ụmụaka - I nwere ikike inweta Barnet Leisure Pass na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụrụ n’enye onye ọ bụla nlekọta na akwadoghị ya. Gafe ahụ na-enye gị ohere ịnweta oge igwu mmiri n'efu, yana ị nweta ego na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na nke ọ bụla n'ime ebe ntụrụndụ ise na Barnet. [More Ama]
Ọzụzụ nkuzi okirikiri n'efu ọ bụrụ na ị bi, na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-amụ ihe na Barnet. Ma ị bụ onye na-agba ịnyịnya oge mbụ ma ọ bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè oge niile na-achọ imeziwanye nka gị na ị dị afọ iri na isii ma ọ bụ karịa, anyị na-enye nkuzi n'efu, ahaziri iji dabara ikike na ebumnuche gị. [More Ama]
Directme ​​na-enye ozi gbasara ọrụ na mmemme maka ụmụaka, ndị na-eto eto na ezinụlọ ha na Barnet. [More Ama]
Anweta na-ewe ohere site na ịpụ apụ, na-enye gị ozi ịnweta ị chọrọ iji rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ebe ga-adịrị gị mfe. Ha enyochala ebe iri puku egwuregwu nke egwuregwu gafere UK na Ireland, gụnyere ụlọ ahịa, ụlọ mmanya, ụlọ nri, ebe a na-ere sinima, ebe a na-eme ihe nkiri, ọdụ ụgbọ oloko, họtel, kọleji, mahadum, ụlọ ọgwụ na ndị ọzọ. Jiri AccessAble chọta ebe nkwagharị ndị nwere oche nkwagharị ma ọ bụ chọpụta ohere na akụrụngwa ndị nwere nkwarụ. AccessAble bụ Ntuziaka Nnweta Gị.
Gaa Leta AccessAble - Nduzi Nnweta Gị
Ama egwuregwu obodo Aldenham bu ebe egwuru-egwu okirikiri nke umuaka / ndi n’eto eto nwere nsogbu nmuta. Anyị akpọrọla ụmụaka ebe ahụ, ọ gara nke ọma. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma nwekwaa ụlọ ọrụ egwuregwu n'ime ụlọ gụnyere ime ụlọ nwere uche, ime ụlọ egwuregwu dị nro na ime ụlọ na-agbanwe agbanwe nke gụnyere ndoli. A na-ahaziri ngwa ọrụ gụnyere ịrị elu osisi, eriri USB na aja aja maka ụmụaka nwere nkwarụ.
Gaa na Aldenham Mba Ama egwuregwu
The Nkwari akụ ga-enyocha ihe ndị ị chọrọ wee dakọtara ndị a na ime ụlọ ihi ụra nwere ike iji gboo mkpa gị. Enwere uzo elu rue ala nile ma ime ura anyi nile nwere uzo mmiri mmiri na-asa, uzo sara mbara maka nnweta di mfe, uzo ndi jidere na usoro oku nkpuchi elekere 24 nke jikotara ndi otu ulo oriri na nkwari akụ.
Gaa Leta Bond Hotel
Ogige Simcha dị iji melite ogo nke ndụ maka ezinụlọ ndị Juu na-arịa ọrịa siri ike nwata. Ọrụ ha bụ iji hụ na ụdị nwatakịrị ahụ, ebe ọ bụla na UK ga-ata ahụhụ na-enweghị nkwado ha.
Gaa na Camp Simcha
Na-agbanwe Ebe Map mposi ga-enyere gị aka ịchọta ụlọ mposi na-agbanwe agbanwe ọsọ ọsọ na mfe! Naanị pịnye obodo, obodo, obodo, n'okporo ámá ma ọ bụ koodu nzi ozi n'ime igbe ọchụchọ wee pịa bọtịnụ Chọta iji chọọ ụlọ mposi na-agbanwe Ebe dị nso na ebe ahụ - dị mfe iji!
Gaa Leta Ebe Mgbasa Ozi Ebe Na-agbanwe Agbanwe
Achọ (Nhazi na rụpụta maka nkwarụ) gbalịsie ike inyere ndị nwere nkwarụ aka imeziwanye ahụmịhe ha biri ndụ kwa ụbọchị na site n'inwe ike ịnweta ohere ndị na-enye ndụ. Ha na enyere ndị nọ n’afọ ọ bụla aka, yana ụdị nkwarụ ọ bụla agbanyeghị ọnọdụ ego ha.
akụkụ nye mba ọzụzụ autism enyi na enyi maka sinima niile n'ofe mba ahụ. Ha na Odeon, Cineworld, Vue, Showcase na Foto ndi ozo ka ha na ndi mmadu mekorita ihe nlere anya nke oma na ihe kariri 350 cinemas na mba. N'ụtụtụ Sọnde n'ime ọnwa niile, a na-enyocha ihe nkiri dabara adaba maka ndị niile na-ege ntị na gburugburu ebe obibi mara mma.
Nkọwa nke autism enyi na ala screenings pụrụ ịchọta ha website na site na mgbe nile autism enyi na enyi akwụkwọ akụkọ: www.udimgbaro.org
Gaa na Akụkụ
QEF Tryb4uFly bụ akụkụ nke Nkewa Mobility Services nkewa; na-enyere ndị nwere nkwarụ aka inweta nnwere onwe na nnwere onwe na mpụga ụlọ ha. Ga njem site na ikuku bụ mgbatị ebumpụta ụwa nke ọrụ mmegharị ha, na-ejikọ nghọta bara uru nke nkwarụ yana nhọrọ ndụ gị, iji nyere aka mee njem site n'ikuku karịa nke ọma na enweghị nchekasị.
Gaa Leta TryB4UFly